Baza, Tooling - Ningbo Highpoint Machinery Co., Ltd
Iqela lethu alungile nokuyila malunga nokuvunda kwaye nokuphuhlisa inkqubo kunye amava atyebileyo. Ngenxa yokuba "ukungunda ngundoqo imveliso" kunye "ukuyila sikuyo isitshixo ukungunda", iinjineli ukuba kubaluleke kakhulu kwinkqubo yokwenza sokubumba. Cad / cam / rahman kunye nezinye iinkqubo uyilo computer phambili zezizwe ngezizwe olubanzi asetyenziswa iinjineli. Ngokusebenzisa ngokutsha noyilo bephosa ukuchonga izisombululo imiba okanye ezikhoyo umgangatho, nokunyusa iingcebiso castability, imali zesinyithi, njl.
• Umngundo flow ubunakho.
Zidle ukunceda for castings neemfuno porosity:
1.Mold flow ubunakho.
2.Vacuum kunceda for castings kunye neemfuno porosity.
Ingqiqo 3.Team ekubunjweni kunye Isixhobo yoyilo.
Inkqubo yoncedo 4.Stress for die ziphosa tooling ukuba nkulu ubomi isixhobo.